DAAWO-Shirkii arrimaha doorashooyinka oo maalintii 3aad socda, rabitaanka beesha caalamka & qodobada doodu ka taagan tahay.
September 15, 2020 Xuseen 1
Maalintii 3aad waxaa magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya ka socda shirka madaxda dowladda federaalka ah, kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo ka arrinsanaya doorashooyinka 2020-21.
Ilo xogagaal ah ayaa sheegay in shirka la soo gabagabayn doono 48-da saac ee soo socda isla markaana ay suurtagal tahay in qodobo laysku waafaqsan yahay laga soo saaray inkastoo qodobada qaar weli laysku hayo.
Dhinacyada oo horay shirar muhiim ah u yeeshay ayaa maanta waxa ay dood adag ka yeelan doonaan waxa laga yeeli doono doorashooyinka dalka iyo qodobada ay tahay inay ka soo saaraan shirkooda.
Shacabka Soomaaliyeed iyo Saamileyda Siyaasadeed ee dalka ayaa isha ku haya Shirka ka socda Muqdisho halka Xubnaha Beesha Caalamka ee taageerada siiya Soomaaliya ay kor kala socdaan shirka, iyaga oo Madaxda culeys ku saaraya inay heshiis gaaraan.
War ninyahow waxaan ku moodey mise waxaad noqotey waxaan nin waxa uu qorayo soo dhamaytire laakin wax walba oo aad qorto lama fahmo marka waxaan kuu gartey in aad tahay kuwa hada farmaajo lacagta siiyo ee uu dhaho i faaaniya aniga kuwa macaaaradna caaya